Guddoomiyaha Guddida Ilaalinta iyo Dabo-galka Hantida Qaranka ee Golaha Wakiillada oo dayntan shaaciyey + dareenkii Wasiir Sacad iyo doodaha Wasiirkii hore ee Maaliyadda | Dhamays Media Group
Hargeysa (Dhamays News) – Guddoomiyaha Guddida Ilaalinta iyo Dabo-galka Hantida Qaranka ee Golaha Wakiillada Jamhuuriyadda Somaliland Md. Ibraahim Mahdi Buubaa, ayaa shaaciyey in Xukuumaddan hadda talada haysa ee uu hoggaamiyo Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay lacag dayn ah oo xaddigeedu dhan yahay $80 milyan oo doollar kala wareegtay Xukuumaddii hore ee Axmed Siilaanyo.Md. Ibraahim Mahdi Buubaa, waxa uu hadalkan sheegay, kadib markii ay Guddidoodu kulan la qaateen Wasiirka Horumarinta Maaliyadda Somaliland Md. Sacad Cali Shire shalay, kaasoo ujeedadiisu ahayd in laga xog-waraysto xisaab-xidhka miisaaniyad-sannadeedkii dowladda ee 2017-ka.
Guddoomiyaha Guddida Ilaalinta iyo Dabo-galka Hantida Qaranka ee Golaha Wakiillada oo markii kulankaasi dhammaaday saxaafadda la hadlay, ayaa sheegay inay Wasiirka ka wadahadleen arrimo kala duwan oo ay ugu muhiimsan tahay lacago dayn ah oo ay Xukuumaddu la ciirciirayso.
“Waxyaabo badan oo madmadaw ku jiray ayaannu isla iftiiminay oo isla garannay Wasiirka iyo kooxda (team-ka) la socdaba. Inyar haddii aan hoos ugu daadego, waxa ka mid ah in Xukuumadda maanta joogtaa ay dayn dhan $80 milyan oo doollar ay kala wareegtay Xukuumaddii hore oo la inoo sheegay siyaasiyan markii laga wadahadlayey xil-wareejintii in aan wax dayn ah oo lagaga tegay ama ay Xukuumaddii hore ka tagtay aanay jirin, dayntaasna ay la il-daran tahay ama ay bixinteedu culays badan ku hayso Xukuumadda,” ayuu yidhi Xildhibaan Ibraahim Mahdi Buubaa.
Wasiirka Horumarinta Maaliyadda Md. Sacad Cali Shire oo goob-joog ka ahaa kulan-saxaafadeedka, ayaan si rasmi ah u beenin, una xaqiijinta jiritaanka lacagta daynta ah ee uu sheegay xildhibaanku, taasoo xaddigeedu dhan tahay $80 milyan oo doollar, balse waxa uu Wasiirku si guud uga hadlay qaabka ay dowladdu dayn ku qaatan karto.
“Horta daynta lagu leeyahay dowladdu maaha wax cusub oo ma jirto dowlad aan dayn gelin, waayo dakhliga iyo baahiyda ayaa had iyo jeer kala badan. Mararka qaarkood isagoo uu dakhligu iman doono, ayaa haddana ay baahidu ka soo horaysaa, waana la sii qaataa oo waa la daynsadaa (sii ammaahdaa), taasina wax caadi ah weeye. Intii xisaab-xidhka la samaynayey ee loo soo gudbinayey Golaha Wakiillada mar walba xisaab-xidhka way la socotaa dayntu,” ayuu yidhi Wasiir Sacad Cali Shire.
Waxa kaloo uu Wasiirku sheegay in aannu isagu xilka Wasiirka Maaliyadda masuul ka ahayn sannadkii 2017-ka oo ah sannad-miisaaniyadeedka uu ku salaysan yahay buugga xisaab-xidhka sannadkaas, waxaannu yidhi; “Maalintii aan xilka la wareegay waa lagayaabaa in Wasiirkii hore uu wax ka yidhi oo waxay ka mid ahayd wixii la igu wareejiyey ee ka mid ahayd xil-wareejinta…Anigu maan joogin (Wasaaradda Maaliyadda) sannadkii 2017-kii oo imminka waxa aan joogaa muddo laba bilood iyo badh ah.”
Ugu dambayntii, Wasiirka Horumarinta Maaliyadda, ayaa caddeeyey in Guddida Ilaalinta iyo Dabo-galka Hantida Qaranka ee Golaha Wakiillada ay isla qaateen in wixii hadda ka dambeeya shuruucda iyo nidaamka la waafajiyo maamulka miisaaniyadda iyo hantida qaranku leeyahay.
“in loo maamulo oo loo raaco wax walba oo la xidhiidha miisaaniyadda ama hantida qaranka sida uu sharcigu odhanayo iyo sida uu dastuurku dhigayo, taas ayaan runtii ballanqaaday oo taas ayaannu ku kacaynaa Insha Allaah,” ayuu yidhi Sacad Cali Shire.
Geesta kale, Wasiirkii hore ee Maaliyadda Somaliland marwo Samsam Cabdi Aadan oo waraysi siiyey telefiishanka Bulsho TV shalay iyadoo joogta dalka Imaaraadka Carabta, waxay ku dooday in aanay jirin wax dayn ah oo Xukuumaddii hore ee Madaxweyne Siilaanyo ay ku wareejiyey Xukuumadda Muuse Biixi, iyadoo si gaar ah u xustay in shaqsi ahaan maadaama ay ahayd Wasiirkii Maaliyadda aanay ogayn wax dayn dowladeed ah oo ay wareejiyeen.
“Anigu waxa aan xilka wareejiyey bishii December 2017, khudbaddii aan halkaas ka jeediyeyna way duuban tahay oo waxa aan ku sheegay in aanay jirin wax dayn ah oo aan wareejinayo, waanan sheegay oo mushaharka shaqaalaha waannu bixinay. Ma jirto kayd lacageed oo dowladda meelo u yaal ee miisaaniyaddeennu waa January ilaa December. Intii dambe ee aan fadhiyey dad ayaa kuula imanaya waraaqo ay ku odhanayaan; ‘Waxa aannu dayn ku leenahay dowladdii hore ama dowladdii ka sii horaysay.’ Wixii dhukanti ahna xafiiska ayuun baad weydiisaa oo aad odhanaysaa; ‘dayntaas miyaa la leeyahay mise lama laha? Anigu dayn lagu leeyahay dowladda waxa aan u aqaanaa daynta ay qaadato Wasaaradda Maaliyaddu ee aan gacan la iskaga dhiibin, balse lagu shubo account-ka (sanduud-xisaabeedka dowladda) oo tulaale ahaan dowladda ayaa lacag dayn ah u baahatay oo waxay tidhi hal milyan ($1,000,000) na siiya oo ku shuba akawnkaas 11 (account 11), akawnkii ayaa lagu shubayaa, waxaanna og Xisaabaha Guud, maamulkii lacagta ayaa og, Guddoomiyaha Baanka ayaana og, taas ayaan dayn u aqaanaa, laakiinse lacag gacan la iskaga dhiibay anigu dayn uma aqaan,” ayey tidhi Samsam Cabdi Aadan.
Waxa kaloo si gaar ah loo weydiiyey inay jirto lacag dhan 80 milyan oo doollar oo ay ku wareejiyey Wasiirkii u horeeyey ee Maaliyadda Xukuumadda Madaxweyne Muuse Biixi, waxayna ku jawaabtay; “Maya. Ma Jirto, caddaynteedana aniga ayaa diyaar u ah oo soo dhaqaaqaya haddii la igu yidhaahdo kaalay beri.”
Previous: Madaxweyne Muuse Biixi oo ku Baaqay in Wadahadal Lagu Xaliyo Muranka Xisbiyada ee ku Gudban Doorashada
Next: Wakiilka Somaliland ee dalka Kenya oo ka xog-waramay shirar uu la qaatay diblomaasiyiin ka tirsan dalalka Jarmalka iyo Finland